Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Jimco Ah 20 May
HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Jimco Ah 20 May
May 20, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Caawa oo aad Habeen kasta kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com
Paul Pogba ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaaray Manchester City laakiin wuu diiday inuu ka dhaqaaqo Manchester United sababtoo ah 29-sano jirkaan khadka dhexe ee France oo qandaraaskiisu uu dhacayo xagaagan ayaa ka walaacsanaa jawaab celin uga timid taageerayaasha United. (Times)
Pogba ayaa weli bartilmaameed u ah kooxdiisii ​​hore ee Juventus , kuwaas oo rajeynaya inay dib ugu soo celiyaan Turin xiddiga reer France marka lagu daro saxiixa khadka dhexe ee Italy Jorginho, oo 30 jir ah, oo ka yimid Chelsea . (Gazzetta dello Sport – Talyaani)
Xiddiga Paris St-Germain Kylian Mbappe ayaa ku dhawaaqi doona go’aankiisa ku saabsan mustaqbalkiisa axada iyadoo 23 sanno jirkaan weerarka ka ciyaara ee France si weyn loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Real Madrid . (L’Equipe – Faransiis)
Arsenal , Newcastle United iyo Everton ayaa xiiseynaya weeraryahanka Barcelona iyo Netherlands Memphis Depay, 28. (Sport – in Spanish).
Weeraryahanka Argentina Paulo Dybala ayaa meesha ka saaray inuu u dhaqaaqayo Tottenham xilli 28-sano jirkaan uu raadinayo kooxdiisii ​​soo socota ka dib markii uu xaqiijiyay inuu ka tagayo Juventus dhamaadka qandaraaskiisa xagaagan. (AS – Isbaanish)
Tottenham ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay amaah ugu dhaqaaqdo daafaca France Clement Lenglet, 26, kaasoo xor u ah inuu ka tago Barcelona . (Sport – Isbaanish)
U dhaqaaqida Barcelona ayaa ah mudnaanta koowaad ee weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski, iyadoo laga wada hadlay qandaraas ku eg 2025, 33 sanno jirka weerarka uga ciyaara Poland ayaan weli la hadlin koox kale. (Fabrizio Romano, Twitter)
Barcelona ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca dhexe ee Napoli Kalidou Koulibaly, oo 30 jir ah, waxayna isku dayi doontaa inay hoos u dhigto qiimaha ay ku dooneyso kooxda reer Talyaani 30-35m euro (£25.5m-£29.7m) iyagoo u bandhigaya khadka dhexe ee Bosnia Miralem Pjanic, 32, taasoo qeyb ka ah wax walba. heshiis (Fichajes – Isbaanish)
Leicester City ayaa bartilmaameedsan doonta 23 jirka khadka dhexe ee kooxda Lyon iyo xulka France Houssem Aouar hadii xiddiga reer Belguim ee Youri Tielemans oo 25 jir ah uu kooxda ka tago xagaaga. ( Fichajes)
Manchester United ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto daafaca dambeedka midig ee Barcelona iyo USA Sergino Dest, 21. (90min)
Dest ayaa noqon kara bedelka daafaca midig ee Ingariiska Aaron Wan-Bissaka, 24, kaasoo loo ogolaan doono inuu ka tago United xagaagan. (Sky Sports)
United ayaa u muuqata inay qarka u saaran tahay inay soo afjarto heshiiska daafaca Netherland ee Ajax Jurrien Timber, iyadoo 20 jirkaan wakiilkiisa uu meesha ka saaray inuu la soo wareego. (Sun)
Newcastle ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto Manchester United Dean Henderson, iyadoo amaah hal xilli ciyaareed ah lagala hadlay goolhayaha England, 25, laakiin la wareegida joogtada ah ayaan meesha laga saarin. (Manchester Evening News)
Divock Origi ayaa qarka u saaran inuu ku biiro AC Milan marka uu qandaraaskiisa Liverpool dhaco xagaagan, iyadoo weeraryahanka Belgium, 27, uu sugayay inuu tijaabada caafimaadka maro. (The guardian)
Arsenal ayaa diyaar u ah inay iska iibiso 26 jirka garabka uga ciyaara Ivory Coast Nicolas Pepe, kaasoo ay kula soo wareegtay rikoorka kooxda 72 milyan ginni 2019, khasaare weyn ayaa soo gaaray xagaagan. (Insider)
West Brom ayaa dejisay qorshaheeda 31-jirka khadka dhexe ee Republic of Ireland Conor Hourihane, kaasoo amaah ku joogay Sheffield United xilli ciyaareedkan, qandaraaskiisa Aston Villa ayaana dhacaya xagaagan. (Insider)
Garabka Southampton Theo Walcott, oo 33 jir ah, ayaa ka fiirsanaya inuu u dhaqaaqo Major League Soccer, iyadoo New York Red Bulls , New York City FC , LA Galaxy iyo Los Angeles FC ay ka mid yihiin meelaha suurtogalka ah ee ciyaaryahankii hore ee England. (Sun)
Juventus ma sii wadi doonto heshiis joogto ah 29-jirka reer Spain ee Alvaro Morata, kaasoo labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay amaah kaga soo qaatay Atletico Madrid . (Marca – Isbaanish)
Manchester United ayaa kansashay abaal-marintii ay bixin jirtay ciyaartoyga sanadka, sababtoo ah ciyaartoydu aad ayay uga xishoodeen inay ka soo qayb galaan xaflad noocan oo kale ah kadib xilli ciyaareed xun. (Mirror)
Newcastle United ayaa wadahadalo heshiis kordhin ah la furi doonta Eddie Howe xagaagan iyada oo abaalmarin lagu siin doono ka fogaanshaha in ay ka harto Premier League. (DailyMail)
Brentford, Bournemouth, Southampton iyo West Ham ayaa xiiseynaya saxiixa 21 jirka garabka ka ciyaara ee Ingariiska Keane Lewis-Potter oo ka socda kooxda heerka labaad ee Hull City. (Telegraph)